Found 262 ~ Mateu, Mako, Lukas, Johannes, Apostlagärningarna, VaRoma, 1 Korinthierbrevet, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Vazivi venyenyedzi vaya pavakaenda, hoyo mutumwa waTenzi akazviratidza kuna Josefi mukurota akati, “Simuka utore mwana naamai vake utizire kuIjipiti ugare ikoko kusvikira ndakutaurira nokuti Herodhi avakuda kutsvaka mwana kuti amuparadze.”
Nezvo ani naani anotyora mumwe wemitemo iyi achidzidzisa vanhu kudaro achanzi mudiki muumambo hwedenga. Asi uyo anoichengeta achiidzidzisa achanzi mukuru muumambo hwedenga.
“Wadzana nomunhu ari kukukwirira dare nokuchimbidza muchiri munzira yokuenda kudare angadaro uyo ari kukukwirira dare akakuisa kumutongi mutongi achizokuisa mumaoko omupurisa, uye uchizoiswa mujeri.
Ko kana muchida vanokudai, munowana mubayiro wei, ko vateresi havaiti saizvozvo here?
“Havasi vose vanonditi, ‘Tenzi Tenzi’ vachapinda muumambo hwedenga asi uyo anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga.
Hero dutu guru remhepo rakamuka mugungwa zvokuti igwa rakanga rava kuda kunyudzwa namasaisai, asi Jesu akanga akakotsira zvake.
Tushiri tudiki tuviri hatutengeswi nesendi here? Asi hapana kamwe katwo kanowira pasi, kusiri kuda kwaBaba venyu.
Munhuwo anopa kune mumwe wavaduku ava kunyange mukombe wemvura inotonhora nokuda kokuti mudzidzi, zvechokwadi chaizvo ndinoti kwamuri haamborega kuwana mubayiro wake.”
Haazoiti gakava kana kudaidzira hapana achanzwa izwi rake mumigwagwa.
Nokuti aninaani anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga ndiye mukoma nomunun'una neni nehanzvadzi naamai vangu.”
Paakanga achikusha kudaro, dzimwe mbeu dzakandowira munzira. Shiri dzakauya dzikadzidya.
Iye akati kwavari, “Sokudaro nyanzvi yose yomutemo yakanyatsodzidziswa zvomutemo woumambo hwedenga, yakafanana nasaimba anoburitsa mudura rake zvitsva nezvitsaru.”
Haana kukwanisa kuita zvishamiso zvizhinji ikoko nokuda kokusatenda kwavo.
Mambo zvakamutambudza mwoyo asi nokuda kwemhiko dzake uye pamusanawo pavaenzi vake akati ngaapiwe.
Zuva parakanga rava kuda kudoka, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, “Muno murenje uye kwava kudoka. Dai machiendesa vanhu vaende mumisha vandozvitengera zvokudya.”
Pita paakaona mhepo, akatya. Akatangisa kunyura ndokudaidzira achiti, “Tenzi ndiponesei.”
Jesu akamupindura achiti, “Iwe mudzimai chitendero chako chikuru! Ngazviitwe sokuda kwako.” Mwanasikana wake akabva anaya pakarepo.
Achiri kutaura kudaro, hero gore rinopenya rakavafukidza; izwi rakabva mugore richiti, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu wapamwoyo wandinofadzwa naye, zvikuru, munzwei.”
Nokuda kokuti akanga asingakwanisi kubhadhara, tenzi wake akati ngaatengeswe pamwechete nomudzimai wake navana nezvose zvaaiva nazvo kuti chikwereti chiripwe.
Iye akati kwavari, “Pamusana pemwoyo yenyu yakaoma, Mosesi akakubvumirai kuramba vakadzi venyu. Asi kubvira pakutanga zvakanga zvisina kudaro.
Remekedza baba naamai vako ugoda mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.”
Panguva inenge yechishanu zuva ravakuda kudoka akabuda akaona vamwe vakamira zvavo. Iye akati kwavari, “Ko munodarirei kungomira zvenyu kudai zuva rose musina chamuri kuita?”
Asi pakati penyu hazvifaniri kudaro. Asi uyo anenge achida kuva mukuru pakati penyu ngaave mushandiri wenyu.
Vanhu vazhinji vaya vakavatsiura vachivataurira kuti vanyarare, asi ivo vakatonyanya kudaidzira vachiti, “Tenzi Mwanakomana waDhavhidhi tinzwireiwo tsitsi.”
Vadzidzi pavakazviona vakashamiswa vachiti, “Ko muonde uyu wauna sei pakare pakarepo kudai?”
Akatuma varanda vake kundodaidza avo vakanga vakokwa kumabiko omuchato; asi havana kuda kuuya.
Wechipiri wakafanana naiwo unoti, ‘Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.’
nokukwaziswa pamisika nokudaidzwa navanhu kuti mudzidzisi.
Nokudaro ndichakutumirai vaporofita navachenjeri nenyanzvi dzomutemo. Vamwe muchauraya zvenyu nokuroverera pamuchinjikwa. Vamwe vavo muchavarova zvikuru mumasinagogu muchivatambudza muguta neguta,
Vasina kungwara vakati kuna vakangwara, ‘Tipungurireiwo mafuta enyu nokuti marambi edu ava kuda kudzima.’
Vadzidzi pavakazviona vakagumburwa nazvo vachiti, “Kurasa mari kudai!”
Pirato akati, “Nemhaka yei? Akapara mhosva yei? Akatadzei?” Asi vakabva vatonyanya kudaidzira vachiti, “Ngaarovererwe pamuchinjikwa.”
Vamwe vakanga vakamirapo pavakazvinzwa vakati, “Munhu uyu ari kudaidza Eriya.”
Nokudaro akafamba neGarirea yose achiparidza mumasinagogu avo, achidzingawo mweya yakaipa.
Zvino Jesu akati achipfuura nomuminda yekoroni uri musi weSabata; vadzidzi vake, vachifamba kudaro, vakatangisa kupurura hura dzekoroni.
Zvino Jesu akakwira mugomo ndokudaidza vaaida, ivo ndokuenda kwaari.
Vanhu vazhinji vakanga vagere pasi vakamukomberedza, vakati kwaari, “Amai venyu uye vakoma navanun'una venyu vari panze vari kukudai.”
Jesu akatangazve kudzidzisa ari pedyo negungwa. Mhomho huru yavanhu yakamuunganira, zvokuti akatokwira mugwa ogaramo iro riri mugungwa kudaro. Gungano rose ndokuti chechetere pamucheto wegungwa.
Akavadzidzisa zvinhu zvakawanda nemienzaniso. Achinokuvadzidzisa kudaro akati kwavari,
Asi kana yadyarwa inokura kwazvo kudarika magwenzi ose. Inoita mapazi makuru, zvokuti shiri dzedenga dzinogona kuvaka matendere adzo mumumvuri wayo.”
Zvino Jesu akati kwavari, “Sei muchitya kudai? Hamuna chitendero here?”
Achiri kutaura kudaro, vamwe vakabva kumba kwomutungamiri wesinagogu uya vachiti, “Mwanasikana wenyu atofa. Muchiri kunetserei mudzidzisi?”
Paakapinda akati kwavari, “Seiko muchiita mhere mhere muchichema kudai? Mwana haana kufa kwete, asi akakotsira.”
Nokudaro vakaenda vakandoparidza kuti vanhu vapinduke.
Mambo zvakamurwadza chaizvo, asi nokuda kwemhiko dzake dzaakanga aita, uye pamusana pavaenzi vake, haana kuda kuramba.
nokuti hachipindi mumwoyo make, asi mudumbu make chichizobva chorasirwa kunze?” (Nokudaro akachenura zvokudya zvose.)
Hanzu dzake dzakapenya dzikachena kuti mbu — u chaizvo zvokuti hapana musuki pasi pano angagone kudzichenesa kudaro.
Paakanzwa kuti ndiJesu weNazareti, akatanga kudaidzira achiti, “Jesu Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo tsitsi.”
Vazhinji vakamutsiura vachiti anyarare, asi iye ndipo paakatonyanya kudaidzira achiti, “Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo tsitsi.”
Jesu akamira akati, “Mudaidzei.” Vakadaidza bofu riya vachiti kwaari, “Tsunga mwoyo; simuka; ari kukudaidza.”
Vari vanomwe kudaro havana kusiya mwana kunze. Pakupedzisira mukadzi uya akafawo.
“Wechipiri ndouyu, “ ‘Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.’ Hakuna mutemo mukuru pana iyoyi.”
Kwouya kuti kumuda nomwoyo wose, nepfungwa dzose, nesimba rose, nokuda mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako, zvinokunda zvibayiro zvose zvechinhu chinopiswa chose zvacho nemipiro.”
“Tiudzeiwo kuti izvi zvichaitika rini uye kuti chiratidzo chokuti zvose izvi zvava kuda kuitika chichava chei?”
Pakava navamwe vakanyunyuta nazvo vachiti, “Mafuta aya atambisirweiko kudai?
Akati, “Abba, baba, kwamuri zvose zvinogoneka, bvisai mukombe wamatambudziko uyu pandiri, asi kusave kuda kwangu, asi kuda kwenyu.”
Pirato ndokuti kwavari, “Nemhaka yeiko? Akapara mhosva yei?” Vakabva vatonyanya kudaidzira vachiti, “Muroverei pamuchinjikwa.”
Zvino vamwe vakanga vamirepo vachizvinzwa vakati, “Inzwai, ari kudaidza Eriya.”
uchizivawo kuda kwake, uchikwanisa kusarudza chakanaka nokuti unenge wakadzidziswa zvomutemo,
zvino iwe kana uri munhu anodzidzisa vamwe kudai haukwanisi here kuzvidzidzisa iwe pachako? Kana iwe uchidzidzisa vamwe kusaba ndiwe woba here?
Zvinoreva here kuti naizvozvo tava kuparadza mutemo nokuda kwechitendero. Hazvidaro kwete, asi kuti tiri kutosimudzira mutemo.
nokuti mutemo unounza chirango asi pasina mutemo hapana kudarika mutemo.
nokuti nokusateerera kwomunhu mumwechete, vanhu vazhinji vakava vatadzi, nokudaro nokuteererawo kwomunhu mumwechete vanhu vazhinji vacharuramiswa.
Asi kana takafa pamwe naKristu kudai tinodavira kuti tichararamawo pamwechete naye.
Naizvozvo handisirini ndinozviita asi kamwoyo kokuda kutadza kanogara mandiri.
Zvino kana ndichiita zvandisingadi kuita, handisirini ndiri kuzviita asi kamwoyo kokuda kutadza kanogara mandiri kaya.
Asi ndinoona kuti mumitezo yangu mune mumwewo mutemo unorwisana nomutemo uri mupfungwa dzangu uchindiita muranda womutemo wakamwoyo kaya kokuda kutadza kanogara mumitezo yangu.
nokuti zvisikwa zvakaitwa zvinhu pasina kwete nokuda kwazvo asi nokuda kwaiye akazviita kuti zvidaro asi chitarisiro chiripo.
pamusana pokuda kuratidza kukura kwembiri yake kumidziyo inofanira kuitirwa tsitsi yaakafanogadzirira mbiri.
Ndizvozvowo zvimwechete nesu kunyange takawanda kudai, tiri muviri mumwechete muna Kristu uye mumwe nomumwe mutezo wavamwe vose.
Uyezve apa munoziva kuti inguva yakadii; kuti nguva yacho yakwana zvino yokuti muchimuka muhope. Ndinodaro nokuti ruponeso rwava pedyo nesu zvino kupinda patakatanga kudavira.
Usiku hwaendedzana, kwava kuda kuedza. Saka ngatichikandai pasi mabasa erima tipfeke demautare rechiedza rokuzvidzivirira naro muhondo.
vakapinda munjodzi yokuda kudimburwa musoro pamusana pangu. Vanotendwa, kwete neni ndoga, asi kunyange namasanganowo ose evechirudzi. Ndikwazisireiwo sangano rinopindira pamba pavo.
sokutinzwisisa kwamunoita zvishoma kuti munogonawo kudada nesu sokudadawo kwatinoita nemi pazuva raTenzi Jesu.
Uku hakusi kuda kukutaurirai zvatiri zvakare asi kuti muwane chikonzero chokuti mudade nesu kuti mukwanise kupindura avo vanozvikudza pamusana pechimiro chomunhu panze pokuzvikudza nounhu hwomunhu.
Ndinovimba nemi zvikuru. Ndinodada nemi kwazvo. Munondipa manyawi. Tine matambudziko edu akawanda zvawo kudai asi tinonzwa kufara zvikuru kwazvo.
Nokudaro isu zvinotinyaradza. Pamusoro pokunyaradzwa kwedu ikoko, takatofara zvikuru kwazvo nokufara kwaTitosi, nokuti imi mose makamugadzanisa hana.
Zvino, chipedzisai basa iroro kuti kuripedzisa kwenyu kuenzane neshungu dzenyu dzokuda kuriita maererano nezvamunazvo.
2 VaKorinte 8:14
asi kuti pave nokuenzana, panguva ino zvamuine zvakawanda movabatsirawo pavasina chokubata kudai, kuti ivo kana vava nezvakawanda imi musina pokubata vagokubatsiraiwo kuti pave nokuenzana.
2 VaKorinte 8:20
Taichenjererawo kuti pasave naanotipa mhosva kuti tinobata sei chipo chakakura kudai.
Asi ndiri kutumira hama idzi kuti kudada nemi kwedu kurege kuva kusina maturo kuitirawo kuti, sokutaura kwandakaita, kuti munge makagadzirira.
Zvingadaro zvikaitika kuti ndinouya navamwe vokuMasedhonia tichizoona kuti hamuna kugadzirira tikazonyara nazvo, tisingatauri zvedu kuti imi muchanyara sei, isu tichivimba nemi kudai.
2 VaKorinte 11:16
Ndinodzokororazve kuti ngaparege kuva nomunhu anofunga kuti ndiri benzi romunhu; asi kunyange mukafunga zvenyu kudaro, nditorei zvenyu sebenzi kuti ndiwanewo mazvikudziro zvishomanene.
2 VaKorinte 12:13
Ko chamusina kuitirwa chakaitirwa mamwe masangano ndechipi kusiya kuti hapana, ini pachangu, chandakakuremedzai nacho. Mundiregererewo kukukanganisirai kudai.
Ndingafare kupedzera imi zvinhu zvangu kana kupera iyeni ndichiitira imi. Zvino kana ndichikudai zvakanyanya kudai, ndicho chingave chikonzero chokundida kwenyu zvishoma here?
Asi nokuda kwehama dzechipameso dzakapinzwa muchivande kuzosora rusununguko rwedu rwatinarwo muna Kristu Jesu kuti dzitipinze muuranda.
Asi pandakaona kuti vakanga vasingaiti zvinowirirana nechokwadi cheShoko Rakanaka, ndakataurira Pita navamwe vose vakanga varipo ndichiti, “Zvino kana imi muJudha kudai muchigara somunhu wechirudzi musingaiti somuJudha, mungagomanikidza sei vechirudzi kuti vagare savaJudha?”
Magwaro Matsvene anoti zvinhu zvose zviri pasi pechitadzo kuti zvinhu zvakatsidzirwa nokuda kwechitendero muna Jesu Kristu zvipiwe kuna vanotenda.
Vamwe vanhu vaya vanoratidza savanokudai kwazvo. Asi chinangwa chavo chaicho hachina kunaka. Chavari kungoda kukuparadzanisai neni kuti muvadewo ivo.
Chinhu chakanaka nguva dzose kuva nechido chakakura kudaro kana chinangwa chacho chakanaka kwete kana ndiinemi chete.
Mwana womuranda akaberekwa sezvinongoitwawo chero munhu. Mwana womusununguki akaberekwa nokuda kwechitsidzo.
Kufurirwa ikoko hakusi kwaiye akakudaidzai.
Muna Tenzi kudai ndinovimba kuti imi hamuzovi nedzimwe pfungwa dzinosiyana nedzangu uye kuti iye ari kukushushai achawana mubayiro wake, kunyange ari ani zvake.
nokuti zvisungo zvose zvomutemo zvinozadziswa nechirevo chimwechete chinoti: “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”
uye kuti mwoyo yenyu ivhenekerwe kuti muzive chitarisiro chaakakudanirai uye upfumi hwenhaka yake inomukurumbira inowanikwa navatsvene
Nokudaro akaita kuti imi muve vapenyu pamakanga muri vanhu vakafa pamusana pezvikanganiso nomuzvitadzo mamakambogara
Nokuda kwaizvozvi ndinopfugama namabvi angu mberi kwaBaba
Saizvozvo varume vanofanira kuda vadzimai vavo sokuda kwavanoita miviri yavo. Munhu anoda mudzimai wake ari kutozvida iye pachake
Nokuda kwaizvozvi murume anosiya baba vake naamai vake achibatanidzwa nomudzimai wake. Vose vari vaviri vachiva nyama imwechete.
Ndikumbirireiwo ini kuti ndiwaniswe mashoko pandinenge ndave kuda kutaura kuti ndiparidze nechivindi chakavandika chiya chezveShoko Rakanaka
Ichokwadi chaicho kuti ndavakuzviona zvisina basa kwandiri pamusana pechinhu chakanakisisa kwazvo chokuziva Kristu Tenzi wangu. Nokuda kwake ndakarasikirwa nezvinhu zvose uye ndinozviona samarara kuti ndiwane Kristu
Kukukurudzirai kwedu hakubvi mune zvemanomano kana mune zvisina kuchena kana kuda kunyengedza.
Ko chitarisiro chedu chii norufaro rwedu chii kana chiremba chedu chokudada nacho pamberi paTenzi wedu Jesu paanouya chii? Hamusirimi here,
1 VaTesaronika 3:3
Uku kwakanga kuri kuti pasave nomumwe wenyu anodzokera shure nokuda kwamatambudziko iwaya. Imi pachenyu munoziva kuti iwoyu ndiwo mugove wedu
1 VaTesaronika 3:8
Zvino tasimbaradzwa upenyu kana mukasimba kudaro muna Tenzi.
Dai Tenzi vangoita kuti kudana kwenyu kuwande kufashukire uye kusvike kuna vanhu vose sokukudai kwatinoita
akatifira kuti kunyange tichiri kubwaira kudai kana kuti tatsinzinya tigare naye.
Iye anokudaidzai, akatendeka uye achazviita.
nouipi hwose hokunyengedza varikundoparadzwa nokuti vanoramba kuda chokwadi uye vanoramba kuponeswa.
Izvi ndizvo zvaakakudaidzirai nokuparidza kwedu Shoko Rakanaka kuti muwane mbiri yaTenzi wedu Jesu Kristu.
1 Timoti 6:4
anozvitutumadza nokuzvikudza, munhu asina zvaanoziva. Munhu ana kamwoyo kokuda gakava nenharo dzezvamazwi anokonzera shanje nokusawirirana namakuhwa nokufungirana kusina kana namaturo ose
1 Timoti 6:9
Asi avo vana kamwoyo kokuda kupfuma vanopinda muchiedzo nomuriva uye mukuda zvinhu zvisina maturo zvinotokuvadza zvinoisawo vazhinji mukupera basa nokuparadzwa
nokuda kwaizvozvi ndinotambudzika kudai, asi handinyari nokuti ndinoziva wandakatenda maari uye ndine chokwadi chokuti anokwanisa kuchengetedza zvakaiswa mumaoko mangu kusvikira Zuva iroro.
2 Timoti 4:10
nokuti, Dhemasi, pamusana pokuda zvapanyika pano, akanditiza akaenda kuTesaronika. Kiresenzia akaenda kuGaratia. Titosi akaendawo Dharimatia.
vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo
Ndingadai ndakatosarudza kuramba ndiinaye kuno kuti andishandire panzvimbo pako nguva yandiri muusungwa kudai pamusana peShoko Rakanaka.
ko, isu tichazopunyuka napapi kana tisina kuita hanya noruponeso rwakakomba kudai? Ndirwo rwakataurwa naTenzi pokutanga, rwukatsinhirwa kwatiri navavo vakamunzwa.
Naizvozvo, chivimbiso chokupinda muzororo rake zvachichiripo kudai, ngatichenjerei, kuti mumwe wenyu angadaro akaonekwa akundikana kupinda muzororo iri.
anomisa rimwe zuva racho achitori doma kuti, “Nhasi uno,” achitaura nomuromo waDhavhidhi, iko kwapera nguva yakati rebei kudai namazwi aya akamborehwa atinodzokorora anoti, “Nhasi kana monzwa izwi rake Musazoomesa mwoyo yenyu.”
kwakafanopindwa naJesu nokuda kwedu zvaakanga ava Mupristi mukuru nokusingaperi wegovero raMerekizedheki.
Chichange chisina kufanana nechitenderano chiya chandakaita namadzitateguru avo, pazuva randakavabata ruoko ndichivaburitsa munyika yeIjipiti nokuti havana kuenderera mberi nechitenderano changu navo nokudaro handina kuzoita hanya navo.” Ndizvo zviri kutaura Tenzi.
Nokudaro kunyange chitenderano chokutanga chakatosimbiswa neropa.
Paanoti pamusoro apo: “Hamuna kuda kana kufarira zvibayiro nemipiro nemipiro yokupisa nemipiro yokupfupira zvitadzo.” (Izvi zvinopirwa maererano nomutemo).
Ndokuzoti: “Tarirai ndauya kuzoita kuda kwenyu.” Arikudzima chokutanga achiisa chechipiri.
Nokuda kwaizvozvo takaitwa vatsvene pamusana pechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakamwe.
Nokudaro musarase chivimbo chenyu chino mubayiro mukuru.
Nokudaro kubva pamunhu mumwechete uye akanga aita somunhu akafa akabereka vana vakawanda senyenyedzi dzedenga uye vasingaverengeki sejecha rapamahombekombe pegungwa.
Ngaakurongedzerei nezvose zvakanaka kuti mukwanise kuita kuda kwake achiita zvaanoda mamuri nokuna Jesu Kristu. Iye Kristu ngaarumbidzwe narini narini. Ameni.
Nokuda kwake akatibereka neshoko rechokwadi kuti tive semichero yokutanga yezvisikwa zvake.
Kana mukazadzisa mutemo woumambo maererano namagwaro matsvene unoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.” Munoita zvakanaka.
Nokudaro chitendero pachacho chisina mabasa chakafa.
Tarisai muonewo zvikepe. Kunyange zvakakura zvazvo kudaro uye zvichisundwa nemhepo dzine simba, zvinotungamirirwa nekadiki kokudzoresa chikepe kunenge kwadiwa nomutyairi.
Zvino imi vapfumi chemai muridze mhere nokuda kwenhamo dzichakuwirai.
Pamusana pokuti anokudaidzai mutsvene, imiwo ivaiwo vatsvene muzviito zvenyu zvose.
Ngaparege kuva nomumwe wenyu anotambudzika nokuda kokuva mhondi kana mbavha kana kuva munhu anoita zvakaipa kana nokuva nhunzvatunzva.
Musaite zvechisimba navari pasi penyu asi mukutova muenzaniso kudanga iroro.
Nokuda kwechikonzero ichochi edzai nokwamunogona kose kuwedzera chitendero nezviito zvakarurama, pazviito zvakanaka wedzerai ruzivo,
Naizvozvo hama shingairai zvikuru kuti musimbaradze kudaidzwa kwenyu nokusarudzwa kwenyu nokuti mukadai hamuzoputsiki.
Ndinofunga kuti zvakanaka pandinenge ndichiri mupenyu kudai,
Pakutanga munofanira kunzwisisa izvi zvokuti hakuna chiporofita chaMagwaro Matsvene, munhu chaanga dudzire sokuda kwake
Vachatambudzika nokuda kwezviito zvavo zvakaipa. Vanoona zvichivafadza kuita zvamafaro masikati machena. Ivo mavara etsvina nezvinokushoresai vachitamba kudaro zvisina tsarukano pavanenge vachidya nemi.
Vakasiya nzira kwayo vakatetereka votevera nzira yaBhiriamu mwana waBheori aida kuzvipfumisa nokuda zvakaipa.
Usatorwe mwoyo nenyika kana nezvinhu zvenyika. Kana munhu akada nyika kuda Baba hakumo maari
Munhu wose ane chitarisiro maari kudai anozvichenesa nokuti iye mutsvene.
Nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubvira pakutanga, rokuti tinofanira kudanana
Ruvimbo rwatinarwo naye ndorwurwu rwokuti kana tikamukumbira chii zvacho chinowirirana nokuda kwake anotinzwa.
2 Johani 1:5
Zvino ndinokukumbirai mai, kwete sokunge ndiri kukunyorerai nezvomutemo mutsva asi mutemo watakanzwa kubvira pakutanga wokuti tinofanira kudana.
Hameno zvavo! Vakatevera gwara raKaini vakazvipinza mukukanganisa kwaBhiriamu pamusana pokuda kuzvipfumisa vachizoparadzwa mukupanduka kwaKora.
Vesangano raSatani, vanozviti vaJudha asi ivo vasiri, vachireva nhema; ndichaita kuti vauye vachizokugwadamira patsoka dzako vadzidze kuti ndakakuda,
Asi nokuda kokuti uno rudziirakure usingatonhori kana kupisa ndichakusvipa mukanwa mangu.
“Munokodzera imi Tenzi naMwari wedu kupiwa mbiri norukudzo nesimba nokuti ndimi makasika zvinhu zvose. Kuda kwenyu kuti zvivepo uye kuti zvisikwe.”
Pakadhiriridza mheni nomwe dziya ndakanga ndava kuda kunyora, asi ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, “Ingochengetedza zvataurwa nemheni nomwe usazvinyoreba.”
Mutumwa wechinomwe akaridza bhosvo rake kukava namazwi okudaidzira mudenga aiti, “Umambo hwapasi hwava humambo hwaTenzi naMesia wake. Achatonga narini narini.”
Muswe waro wakakumba chikamu chechitatu chenyenyedzi dzedenga ukadzikanda pasi. Zigaranyanya riya rakandomira pamberi pomudzimai akanga ava kuda kusununguka mwana kuti ridye mwana wake paanongomupona.
“Maiwe! Maiwe guta guru kudai rakanga rakapfeka rineni yakanakisisa nehanzu dzoruvara rwohute netsvuku rakashongedzwa nendarama nezvishongo namapera.”
Vakazvidira ivhu mumusoro vachichema vachiungudza vachiridza mhere vachiti, “Maiwe! Maiwe guta guru kudai rakapfumisa vose vaiva nengarava munyanza, neawa imwechete raparara.